युगसम्बाद साप्ताहिक - जातलाई होइन, कमजोरलाई उठाउने नीति चाहियो - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 04.07.2020, 10:23am (GMT+5.5) Home Contact
जातलाई होइन, कमजोरलाई उठाउने नीति चाहियो - महेश्वर शर्मा
Monday, 02.06.2012, 02:51pm (GMT+5.5)
हामी नेपालीलाई फुटाएर फाइदा उठाउन विदेशीले अघि पनि कोसिस नगरेका होइनन्, तर हाम्रा पुर्खाले आपसमा मिलेर बुद्धिमानीसाथ उनीहरूका दूषित मनसाय पूरा हुन दिएका थिएनन् । आज भने हामी आफैं बाझिएर दुश्मनका इरादा पूरा गर्न आफैं सघाउँदैछौ । जातीय, संघराज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता आत्मघाती काम गरेर आफ्नै घर भत्काउन खोज्दैछौं । योभन्दा ठूलो बेइमानी र राष्ट्रघात अरु के होला ? ‘सौताका रिसले पोइका खुट्टा काट्ने’ भनेझैं राजाका रिसले गर्दा गिरिजाप्रसादले विषवृक्ष रोपेर गए भने आजकाहरूले त्यसैलाई हुर्काउँदैछन् र नेपालको भविष्यमाथि खेलाँची भैरहेको छ । यस्तो स्थितिमा हस्तक्षेप गरेर वा समन्वय गरेर समस्या सुल्झाउने शक्ति नरहेकाले स्थिति जटिल बन्दैगएको छ । गिरिजाले रोपेको बाली प्रचण्डले काट्न आँटेको देखेर गिरिजा कोटरी राष्ट्रपतीय पद्धतिको विरोध गर्दैछ ।
द्वितीय विश्वयुद्धका बेला भारतीय कंग्रेसले अंग्रेजलाई समर्थन नगरेपछि मुस्लिम लिगले समर्थन ग¥यो । तर समर्थन गरेवापत एक वर्षपछि अर्को शर्त राख्दै स्वीकार गराउँदै गरेर जिन्नाले पाकिस्तान बनाए । उनले बलजफत पाकिस्तान त बनाए तर केही वर्षपछि पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बन्यो । यहाँ पनि मधेशी मोर्चाले बाबुराम सरकारलाई समर्थन गर्न शर्तमाथि शर्त राख्दै स्वीकार गराउँदै आएको छ र त्यसै वापत कथित जनसरकारका निर्णय र असंगत माग समेत सरकार पूरा गर्दैछ । वास्तवमा बल प्रयोग र गलत मनसायबाट गरेका कामले स्थायित्व लिन गाह्रो पर्छ । आज यहाँ बलात् संघीय र जातीय राज्य बनाउन त खोजिंदैछ तर त्यसले कति स्थायित्व लेला ? भनेर सोचिएको छैन ।
बल प्रयोग गर्नेसंग जनता डराउँछन् । सामान्य किसिमले चाहिने कुरा मात्रै गर्ने चाहिं पछिपर्छन् । माओवादी विद्रोहलाई नै हेरे हुन्छ । उनीहरूले अत्याचार गरेर थर्काएकाले मनले नमाने पनि उनीहरूले जेजे भन्छन् त्यही गर्न गाउँका जनता बाध्य थिए । त्यसैले जनतालाई हात लिन नसक्ने देखेर नै लडाकु र वाईसीएल प्रयोग गर्ने मनस्थितिमै छन् । आफ्नो पकड बलियो पार्न माओवादीले जातित्वका नारा लगाएर अबोध जनतालाई उचालेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्दैछन् । समाजमा उब्जिने धार्मिक–भाषिक या जाति र सम्प्रदायगत जेजति झगडा देखिन्छन् ती सबैका पछाडि राजनीति गर्नेहरूकै स्वार्थ लुकेको हुन्छ । विभेदका प्रश्न उठाउने, भेदभाव र जातित्वका प्रश्नलाई चर्काउने एवं भड्काउने काम राजनीतिक स्वार्थकै कारण हुने गरेका छन् । यहाँ चलाइएको जातीय संघराज्य र विखण्डनको प्रसंग पनि त्यही विकृत राजनीतिकै उपज हो । आज सद्भावपूर्ण समाजमा विभाजनको बीउ रोपेर मनोमानी हिसाबबाट आदिवासी, जनजाति र अन्य जातिका शब्दावली प्रयोग गरेर पक्ष–विपक्षमा उभ्याउन खोजिएकाले भोलि त्यसले जातित्व र साम्प्रदायिक दंगा हुने अवस्था आउनसक्छ ।
कमजोर वर्ग र समुदायलाई उठाउने चोखो मनसाय भए त्यस्ता कमजोर सबै जात–वर्ग र समुदायमा छन् । जातलाई होइन, जुनसुकै जातका भए पनि शिक्षा र हैसियतमा कमजोर देखिएकालाई उठाउने नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । कुनै पनि समुदाय कमजोर हुनुको कारण अशिक्षा र गरिबी नै हो । यिनै दुई कुरा हटाउने सोचाइबाट प्राथमिकताका साथ काम गर्न सक्नुपर्दछ तर त्यसतर्फ कुनै काम भएको छैन । आजसम्म केवल जातजातिलाई झड्काएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्रै भएका छन् । पछिपरेकालाई उठाउने भनेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसका लागि सुझबुझ र ठोस कार्यनीति पनि चाहिन्छ । यहाँ त केवल जातीय र संघराज्यका खोक्रा नारा फलाकिंदैछन् । यो सबै देशलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो ।
अशिक्षा र गरिबी हटाउने रणनीति र व्यवहारिक कार्यक्रम खोई ? त्यसै सोझा सिधा जनतालाई भड्काएर जातीय राज्य दिन्छौ भन्नु मुर्खता सिवाय केही हुने छैन । जातीय संघीय राज्यमा समस्या के के आउन सक्छन् र समाधानका उपाय के हुनसक्छ भनेर सोचिएको छैन । केबल फोस्रा नाराका पछि सबै दगुरेका छन् । यो सबै दलहरूको र सरकारकै काँचोपन हो । उद्देश्य हुनुपर्ने हो– जनताको जीवनस्तर सुधार, तर यहाँ आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ सुधार हेरिएको छ । जाति र सम्प्रदायका आधारमा आरक्षण र अग्राधिकार होइन, शिक्षा र निर्धनताको स्तर निर्धारण गरेर विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । आरक्षण र संरक्षणमा ठूलो अन्तर छ । कम्तिमा दश वर्षका लागि सरकारले प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउनु पर्दछ ।
सम्पूर्ण नेपाली सक्षम भएर काम गर्न नसकेसम्म र त्यस्तो वातावरण नबनेसम्म नेपाल बन्दैन । जातीयता र संघीयताले त नेपाल बन्ने सम्भावनै समाप्त पारिदिन्छ । अल्पसंख्यकको भलाइका नाममा जवर्जस्ती गर्न खोजियो भने त्यस्तो शासन न प्रजातान्त्रिक हुन्छ न त दिगो नै । बरु कुनै पनि बेला जातीय वैरभाव र विस्फोटको कारण बन्नसक्छ । जातीय राज्य, आरक्षण र अग्राधिकार नेपालीहरू बीचको सद्भावना र खाडल खनेर फुट पैदा गर्ने र नेपालीको शक्ति क्षीण पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपाल त यहाँ बस्ने सबै नेपालीको साझा थलो हो र यसमा सबैको बराबर हक र दायित्व छ भन्ने नबिर्सौं ।
आज नेताहरूले विभिन्न जात वर्गलाई जसरी जथाभावी आश्वासन बाँडेका छन्, त्यो नै घातक छ । मेलमिलाप र एकतामा बल पु¥याउनु सट्टा नेताहरू शत्रुले पनि नगर्ने काम गरिरहेका छन् । विखण्डित नेपालले कहिल्यै प्रगति गर्न सक्ने छैन । नेताहरूले अझै पनि सोचेर बुद्धि विवेकसम्मत बाटो लिन सकेनन् भने अन्ततः त्यो उनीहरूकै लागि पनि खतरा बन्ने छ । जातीय र वर्गीय हिसाबमा राजनीति गर्न नछोड्ने हो भने देशमा कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिरता आउने छैन र सधैं भद्रगोलको स्थिति रहिरहने छ । जातीय नाराका भरमा राजनीति गर्छौं भन्नेहरू पनि कहिल्यै राजनेता बन्न सक्ने छैनन् । निजी राजनीतिक स्वार्थका लागि उठाएका नाराले राष्ट्रिय नेतृत्व बन्दैन र नेता पनि सही अर्थमा नेता बन्न सक्दैनन् । एक दिन त जनताले चिनिहाल्छन् नि ।
हिजोआज राजनीति किन यतिविधि विग्य्रो भन्छन् मान्छेहरू । यसको मूल कारण हो– राजनीतिक नेतृत्वमा तिनै ठूलाबडा, शोषक, सामन्त, जमीनदार, बाबुसाहेब र अवसरवादी उपरचोट्टाहरू हुनु हो । यिनीहरू देश र जनताका लागि होइन, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि काम गरिरहेका छन् । त्यसैले स्थिति विग्रदैछ । राजनीतिलाई सही बाटोमा लगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरूकै बेइमानीले गर्दा राजनीति नै बदनाम भएको छ । न्यायाधीश इमान्दना भएन भनेर कानुनलाई दोष दिन मिल्दैन । त्यस्तै नेता गतिलो भएन भन्दैमा राजनीतिलाई दोष दिनु पनि उचित हुँदैन । यहाँ नेताहरूकै स्वार्थको लडाइले गर्दा पनि राजनीति आफ्नो लिकमा हिंड्न पाएको छैन । आफ्नो हुँदो भए नराम्रो पनि राम्रो र अर्काको भए राम्रो पनि नराम्रो भनेर विरोध गरिरहने प्रवृत्तिले पनि यहाँ बाटो छेकेको छ । अब पुनः संघीयताकै प्रसंगमा जाऊँ ।
आजको स्थितिमा संघीयताका आडमा कुनै पनि स्रोत साधन सम्पन्न संघले केन्द्रका विरुद्ध विद्रोह गरेर आफूलाई स्वतन्त्र राज्य घोषित गर्न र केन्द्रलाई दिनुपर्ने राजश्वको अंश नदिन सक्छ कि सक्दैन ? त्यस्तो स्थिति आएमा अरु राज्यले पनि त्यसको अनुशरण गर्लान् कि नगर्लान् ? राजनीतिका नाममा, जातीयता र संघीयताका नाममा हुनसक्ने यस्ता सम्भावनाको पूर्वानूमान र उपचारको व्यवस्था वा प्रावधान समेत सोच्नु पर्ने नपर्ने के हो ? र राजनीतिक समाधानका उपाय आजै नसोच्ने र आँखा चिम्लेर संघीय राज्यमा जाने हो भने जातीय विद्वेष र संघर्षले देशलाई कहाँ पु¥याउला ? कल्पनै गर्न सकिंदैन ।